Can komzimba kube izinga lokushisa?
Yokungezwani komzimba, ovame ukubizwa ngokuthi isifo ngekhulu xxi - a modified reactivity, kubangelwa izinto angaphandle. Sikuveze isifo uthi: edema, rhinitis, isifuba somoya, njll ...
Eminyakeni yamuva, lesi sifo has a isikhundla okuholela emhlabeni wonke. Ngokwezibalo, ingxenye yesithathu yabantu abasemhlabeni wonke ngezindlela ezingafani, isifo esisodwa noma kwenye izimpawu zayo.
Luningi kokuqagela ngendaba lokho kuphakamisa ezazingaziwa kuhlasela abantu, kodwa akukho definition ngokucacile imithombo lesi sifo. Futhi, odokotela abanayo impendulo ecacile umbuzo ukuthi komzimba akanawo umkhuhlane?
odokotela abaningi bakholelwa ukuthi isifo kubonakala izimpawu zangaphandle kuphela: amakhala yisisu, ukulunywa, ukuqubuka, ukukhwehlela, akhalayo, noma tebhu. Nokho, isibonelo, ukusabela okukhulu atypical kungase kubonakaliswe kuphela komzimba ngaphandle izimpawu ejwayelekile. Ukwenza emacaleni anjalo kubalulekile ngokushesha.
Can komzimba kube izinga lokushisa lapho isici okufanele uzibheke
Ngo ukuhlaselwa hay fever kanye somoya bronchial lokushisa ngokuvamile ungephansi kwemandla. Kungenjalo, emzimbeni, okungenzeka kakhulu endleleni kuyinto ukuvuvukala. Ingane esidingekile ukukhombisa udokotela ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Izidakamizwa ukungabekezelelani. Can komzimba kube izinga lokushisa?
Indlela Abasabela Ngayo yonke imithi kuthathwe kuhambisana izimpawu ezifana ukudakwa, ukulunywa kwesikhumba futhi nolwelwesi lwamafinyila, ukuqubuka, lokushisa ongama ngokushesha. Izindlela ezivame kakhulu kubhekwa ukuthi singayivumeli umndeni penicillin, barbiturates, sulphonamides, insulin, anticonvulsants, ukubulala izinzwa engxenyeni ethile, aspirin.
Ukuze okuqhubekayo ongaphakeme grade lokushisa (37,1-37,5) ezinganeni abaneminyaka engama ezimbili, okuyinto kuhambisana komzimba nezinto, ukwanda lymph node, kufanele ufune iseluleko yezifo ezithathelwanayo noma TB onguchwepheshe.
Household antigen. Can komzimba kube izinga lokushisa kule ndaba?
Ukulunywa yizinambuzane, bee noma umuvi bavame ukubanga ukwanda lokushisa. Ngokuvamile eba yokusabela enobudlova umzimba, futhi, ngaphezu komzimba okukhulu, kukhona ukuvuvukala kanye umuzwa esivuthayo endaweni bite, umgudu ukuvuvukala, umfutho wegazi lehla. I esiyingozi kakhulu uphawu - angioedema.
Kwenzeka ukuthi ukusabela kubangelwa antigen yasendlini kuhambisana lachrymation futhi ongaphakeme grade imfiva. Uma ngemva kokuthatha antihistamine lokushisa evamile - ukusabela kuyinto atypical. Uma kungenjalo, kufanele uthintane kudokotela wezingane.
Kungenzeka yini izinga lokushisa endaweni yokungezwani komzimba ukudla?
Isenzakalo njalo isikhathi sethu kubizwa ngokuthi ekuphenduleni antigen ukudla. inqubo olunamandla kuhambisana ngesisa besisu, ubuhlungu colicky esiswini, ukuhlanza, ukukhishwa isisu kwenzeka futhi okusezingeni eliphezulu (39-40 ° C) lokushisa. Yini okumelwe uyenze? Ngokushesha shayela i-ambulense.
Ukuthi komzimba lokushisa ingane yakho?
Uma impendulo kufanele ibe impoqo luhlolo emitholampilo ukucaciseleka sezizathu. Endabeni acute reception inqubo kuyaqabukela kuphela antihistamine ziyasebenza. Njengomthetho, allergists esimisiwe yokwelapha eziyinkimbinkimbi okuhloswe ngalo ukuqeda adakwe ukubonakaliswa lingaze.
Indlela esiphatha ngayo Ari?
Kuthiwani uma chilled emsipheni ebusweni?
Umsindo njalo ekhanda lakho esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe ke?
Indlela ukubhala kahle: ngaphambi noma esikhathini esizayo? Sithola ndawonye
Imbali injabulo besilisa.
Monocots futhi dicots: uyini umehluko?
Kanjani ukushintshela ulimi ezahlukene OS
Inkolo: Uyini umoya ongcwele?
Workforce analytics: kafushane